Faritra Melaky : Atao mitarika amin’ny famokarana sy fambolena -
AccueilRaharaham-pirenenaFaritra Melaky : Atao mitarika amin’ny famokarana sy fambolena
Faritra Melaky : Atao mitarika amin’ny famokarana sy fambolena
21/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Isan’ireo faritra mbola tara eo amin’ny fampandrosoana ny faritra Melaky, raha oharina amin’ireo faritra hafa eto Madagasikara. Nefa mazava ny tanjon’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery entina hampandrosoana ity faritra ity, ka isan’izany ny hanaovana azy mitarika amin’ny famokarana sy ny fambolena, raha nidina tany an-toerana ny tenany omaly. “Tsy maintsy mitodika amin’ny vahoaka maro an’isa, amin’ny mpamboly rehefa te-hampandroso ny firenena. Noho izany, ataon’ny Filoha faritra mitarika eo amin’ny famokarana sy ny fambolena ny faritra Melaky. Efa noresehan’ny Filoha lahatra ireo mpamatsy vola ka izay no nahatonga ny Fida, sy ireo mpamatsy vola hafa tonga niaraka amin’ny tetikasa AD2M. Tsy hijanona hatreo fa mbola hitombo avo efatra heny ny vola hampandrosoana ny faritra Melaky, izay manodidina ny 200 tapitrisa Dolara entina hampandrosoana ny fambolena sy hanamboarana fotodrafitrasa”, hoy ny Filoha nanome toky ireo vahoakan’i Mainitirano, Betanatanana ary Antsahalova, omaly hatrany, nandritra ny fametrahana ny tetikasa fametrahana toho-drano any amin’iny faritra iny.
Fantatra fa toho-drano dimy, velarantany 6400 ha no atao mamokatra, ka ny 4500ha dia lemaka, tany vaovao hitondrana rano, hitondrana famatsiana maro samihafa mba hampitomboana vokatra any an-toerana, ka vahoaka 30 000 no hisitraka izany ary anisan’izany ny tanora. Ankoatra izay, sekoly ho an’ny fambolena, no napetraka any an-toerana izay tafiditra amin’ny fandaharan’asa “format prod”, hitondra fahaizana, fahalalana ho an’ireo tanora ary antenaina hampitombo ny vokatra sy ny harena hanatsarana ny fari-piainan’ny tanora sy tantsaha. Izay manaporofo fa miasa ho an’ny vahoaka ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina, satria amin’ny alalan’ny asa ihany no hanehoana ny fitiavan-tanindrazana.
Olana mbola sedrain’ny mponina an-toerana nefa ny angovo, rano, indrindra ny lalana, nilaza ny Filoha fa tsy vita indray andro ny fanaovana fandaharan’asa fa mila fotoana, ka mila fotoana izy hanaovana ny lalana mampitohy ny Maintirano amin’ny Tsiroanomandidy, ary tsy maintsy ho vita izany. Ankoatra izay, nanolotra kamiao, “tracteur”, “ambulance” hiatrehana ny loza voajanahary ny Filoha. Nitondra fitaovana ho an’ny sampandraharaha mitsirika ny famantarana ny toetr’andro ihany koa, toa ny solosaina sy solosaina entin-tanana, “scanner”, “imprimante”, ary “moto” hampandrosoana ny tanàna.
metropolitan group home exteriors dans Atsimondrano-BASY KILALAO NANAFIHANA TOKANTRANO
Internet Marketing dans Directe al desirabilite de un nov lingua refusa continuar
mini cupcakes formar dans L’incendie du Rova de Manjakamiadana, 20 ans plus tôt
Kidnapping : Administratera sivily iray karohina
Mahatondra Faneva. Izy ilay administratera sivily karohin’ny polisy ao amin’ny sampana misahana ny heloka be vava hatramin’izao. Tsy vitan’ny hoe voarohirohy amina afera maloto fa tena isan’ireo jiolahy raindahiny mihitsy. “ Dimy farafahakeliny ny raharaha ...Tohiny
Filoha Rajaonarimampianina : “FITARATRY NY FAMPANDROSOANA I NOSY-BE”
Hvm Marovoay : Ampifandraisina ny politika fampandrosoana sy ny filan’ny mponina
Web project Management: It's awesome in favor of me to have a website, which is beneficial in support of my knowledge. thanks…
home page: Тhis dеsign is ѡicked! You obviouѕⅼy know how to keep a reader entertained. Between your wit and yoսr…
metropolitan group home exteriors: Title [...]just beneath, are various completely not connected web-sites to ours, having said that, they're certainly worth going over[...]